Ungasebenzisi Imali Eningi Ku-Web Design Yakho | Martech Zone
Musa Ukuchitha okuningi ku-Web Design Yakho
NgoMgqibelo, July 4, 2009 NgoLwesine, Juni 29, 2017 Douglas Karr
Abangane bami abaningi bangabaklami bewebhu - futhi ngiyethemba ukuthi abazukucasuka kulokhu okuthunyelwe. Okokuqala, ake ngiqale ngokusho ukuthi ukwakheka okuhle kwewebhu kungaba nomthelela omkhulu ohlotsheni lwamakhasimende owakhangayo, amazinga okuphendula amathemba okuchofoza kuwo, kanye nemali engenayo yenkampani yakho.
Uma ukholelwa ukuthi umkhiqizo omuhle noma okuqukethwe okuhle kunganqoba ukwakheka okungalungile, wenza iphutha. I- buyela ekutshalweni kwemali kumiklamo emihle kuye kwafakazelwa kaninginingi. Kusifanele ngokuphelele isikhathi nezindleko.
Lokho kusho… ukwakheka okuhle akudingi ukuthi kukubize imali enkulu kangako, noma kunjalo. Izinhlelo zanamuhla zokuphathwa kokuqukethwe kwewebhu njenge WordPress, Drupal, I-Django, Joomla, Magento (kwezohwebo), Injini Yokuchaza, njll. Zonke zinezinjini ezibanzi. Kukhona nezinhlaka eziningi zokwakhiwa kwewebhu, njenge I-YUI Grids CSS, yamasayithi enziwe ekuqaleni.
Inzuzo yokusebenzisa lezi zinhlelo ukuthi ungakwazi londoloza okuningi yesikhathi sakho sewebhu nesomklami wezithombe. Imiklamo yewebhu yobungcweti ingabiza u- $ 2,500 kuya ku- $ 10,000 (noma ngaphezulu ngokuya ngephothifoliyo nezinkomba ze-ejensi). Isikhathi esiningi esiningi singasetshenziselwa ukuthuthukisa ukuhlelwa kwekhasi ne-CSS.
Esikhundleni sokukhokhela izakhiwo ne-CSS, kungani ungakhethi ezinkulungwaneni zezingqikithi esivele zakhiwe futhi umane asebenzise umculi wakho wezithombe umdwebo wokuqhafaza? Ukwephula idizayini enhle eyakhelwe ku-Photoshop noma i-Illustrator nokuyisebenzisa kutimu ekhona kuthatha ingxenyana yesikhathi kunokuklama konke kusuka ekuqaleni.
Inzuzo eyengeziwe yokusebenzisa le ndlela ukuthi ukwakheka kungathinta ukwenziwa kwezinjini zokusesha kanye nokusebenziseka - into abakhiqizi bengqikimba abayiqaphelayo ngaphambi kokushicilela nokuthengisa izingqikithi online. Njengoba abafundi bami abaningi bengabasebenzisi beWordPress, elinye lamasayithi engiwathandayo ngalokhu yiWooThemes. KuJoomla, i Izindikimba ze-Rocket inokukhetha okuhle.
Iseluleko esisodwa esingeziwe, lapho wena bhalisa noma uthenge lezi zingqikithi - qiniseka ukuthola ilayisense lonjiniyela. Ilayisensi kanjiniyela ku-WooThemes icishe iphindwe kabili izindleko (namanje iqala ku- $ 150 kuphela!). Lokhu kukunikeza ngefayela le-Photoshop langempela ukunikeza umculi wakho wezithombe ongaklama naye!
Tags: I-DjangoDrupalInjini YokuchazaI-joomlaMagentoindlamuWordPressI-Yahoo UIigridi ye-yui css
Ibhizinisi Lakho Nokumaketha NjengoMfula
I-Marketing Real Estate Online iguqukile
Jul 4, 2009 ngo-7: 33 PM
Ngithanda izifanekiso zeCSS ku- http://www.webassist.com. Eziningana zikhululekile, kepha kukhona nezinye eziningi ngemali encane.
Jul 7, 2009 ku-1: 12 AM
Kwesinye isikhathi abaphathi bewebhu ababheki ukuthi singakanani isikhathi sokwenza kabusha isondo. Sebenzisa izifanekiso futhi ulungele ukuya ku-Themes kuyithuba elihle futhi kwesinye isikhathi MAHHALA. Vele uyisebenzise!
Iposi Elikhulu. Sizobuyela ukuthola eminye imininingwane.
Jul 8, 2009 ku-12: 47 AM
Ngivumelana ngokuphelele ngalokhu. Njengenkampani esekwe kudizayini sizama ukusebenzisa izingqikithi kanye nekhodi yangokwezifiso ukuklama ukwakheka kwewebhusayithi kushibhile ngangokunokwenzeka.
Jul 10, 2009 ku-4: 13 AM
Ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi inkampani yakhelwe yiphi inkampani.
Ngiyavuma ukuthi kunezifanekiso eziningi ezinhle laphaya ezingenza kube nokwenzeka ukudala iwebhusayithi ebukeka kahle eshibhile. Heck, eyami ibhulogi iyi-100% template futhi ngiyayithanda!
Kodwa-ke, ithempulethi ingahle ingasebenzi njalo kunkampani enkulu, ekhethekile kakhulu noma eyodwa enezidingo ezithile isiza sethempulethi esingahle singabheki.
Ngokwemvelo, ngiyabandlulula njengoba i-ejensi yami idala amawebhusayithi "abizayo" awenzelwe ngokwezifiso 🙂
Kodwa-ke, sike sazama esikhathini esedlule ukusebenzisa izifanekiso kumakhasimende ethu futhi isikhathi esiningi, bafuna ukuyishintsha, bayishintshe, futhi "bayenze ihluke" futhi kugcina sekungumklamo wangokwezifiso noma kunjalo.
Ngokwengeziwe, sinakekela kakhulu ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wenkampani ubonakala kahle ekwakhiweni kwewebhusayithi. Lokhu akutholakali kalula uma usebenzisa izifanekiso.
Ekugcineni, iningi lamakhasimende ethu lisebenzisa izinhlelo ezithile zewebhu kusayithi labo njengokubhaliswa kwemicimbi, izinhlu eziyinkimbinkimbi zemikhiqizo, namathuluzi wokumaketha ukuphatha imikhankaso. Iminyango yezokumaketha ezinkampanini ezinjengalesi incike kithi ukuklama iwebhusayithi enwetshiwe engenamthungo wenkampani ekhona. Amasayithi afana nalawa adinga ubuciko nobungcweti ukuqinisekisa ukuthi lezi zinto zihlanganiswe ngaphandle komthungo futhi angizizwa sengathi isifanekiso sizonelisa kulezi zimo.
Ingabe isayithi langokwezifiso "elibizayo" lawo wonke umuntu? Cha. Kodwa-ke, vele uqiniseke ukuthi uyazi iklayenti lakho. Kwesinye isikhathi isifanekiso silungile. Ngezinye izikhathi, kusifanele isikhathi esengeziwe nokutshalwa kwemali ukwenza indawo eyingqayizivele ekhombisa kahle uphawu lwenkampani.